Gar-adag:Go’aamo iyo Baaqyo ka soo baxay Shirweynaha Beelaha H/Jeclo oo soo dhamaaday. | Samatar's Weblog
Just another WordPress.com weblog	Gar-adag:Go’aamo iyo Baaqyo ka soo baxay Shirweynaha Beelaha H/Jeclo oo soo dhamaaday.
Gar’adag (Gar-adag..16Ogost) – Shirweynaha Beelaha Bariga Burco (H/Jeclo) uga socdey magaalada Gar’adag ee
Gobolka Sanaag oo maanta soo gebageboobey ayaa soo saaray baaq iyo go’aamo ka soo baxay arrimihii shirku ka hadlay muddadii uu socdey. Waxaana la filayaa in berrito si rasmi ah looga akhriyo baaqyada iyo go’aamada Shirka xaflad ballaadhan oo loo samaynayo xidhitaanka shirka
Gobolka Sanaag oo maanta soo gebageboobey ayaa soo saaray baaq iyo go’aamo ka soo baxay arrimihii shirku ka hadlay muddadii uu socdey. Waxaana la filayaa in berrito si rasmi ah looga akhriyo baaqyada iyo go’aamada Shirka xaflad ballaadhan oo loo samaynayo xidhitaanka shirka.
Shirka Beelaha Bariga Burco oo si rasmi ah u furmay 26 July, waxa saaka laga akhriyey go’aamo iyo baaqyo 18 qodob ah, kuwaas oo 10 ka mid ahi ay yihiin kuwo gaar u ah beesha iyo danaheeda, halka 8da qodob ee kale ay yihiin kuwo caam ah oo loogu talagalay Saxaafadda.
Baaqa iyo Go’aamada Shirka oo uu ku saxeexan yahay Shir-gudoonka Shirka Iyo Suldaanka Guud ee Beelaha Bariga Burco Suldaan C/Laahi Suldaan Cali Muuse ayaa waxa ay u dhignaayeen Sidan:
1. Shirku waxa uu si buuxda u taageersan yahay una aamin sanyahay Ilaalinta Jiritaanka iyo Madax-banaanid Somaliland, waxana uu Beesha Caalamka, Ururada Midowga Yurub, Midowga Afrika, Jaamacada Carabta, Ururka IGAD, ugu Baaqayaa inay qadderiyaan rabitaanka Shacbiga Somaliland oo ah aqoonsiga Madax-banaanid Somaliland,.
2. Shirku waxa uu garwaaqsan yahay, aaminsan yahayna ilaalinta Nabadgelyada Somaliland in ay muhiim tahay.
3. Shirku waxa uu Beelaha Somaliland ku wada dhaqan ugu baaqayaa ilaalinta Nabada Iyo Nabad-ku-wada noolaanshaha iyo sidoo kale deris-wanaag in lagu wada noolaado.
4. Shirku waxa uu dalalka deriska ah ugu baaqayaa Nabad-ku-wada noolaanshaha oo uu aaminsan yahay in ay qayb ka tahay deris wanaaga.
5. Shirku waxa uu canbaaraynayaa dhamaanba falalka argagixiso, Afduub, Jidhdil iyo Dhamaanba Xadgudubada ka dhanka ah Xuquuqda Aadamaha oo dhan, cid-kasta oo ku kacda.
6. Shirku waxa uu meel-kadhac u arkaa dhamaanba xadgudubyada lagu hayo Suuqa Xoolaha Somaliland oo Dastuurku ka dhigaayo mid madax-banaan, Sidaas daraadeedna waxa uu xukuumadda Somaliland u soo jeedinayaa in ay faraha kala baxdo Suuqa Xoolaha, oo laf dhabar u aha hanaanka dhaqan dhaqaale ee dalka.
7. Shirku waxa uu walaacweyn ka qabaa nidaamka Diwaangelinta Doorashooyinka soo socda, gaar ahaan Qodobada odhanaaya “Codbixiyuhu-waxa uu ka codayn karaa oo keli ah goobta uu iska diiwaangeliyey”. Waxana uu ka codsanayaa Golayaasha Sharcidejinta inay wax ka beddelaan qodobadaas, isla markaana xeerarka dalka la waafajiyo hab-dhaqanka iyo duruufaha dadka reer guuraaga ah.
8. Shirku waxa uu Xukuumada ugu baaqayaa in ay waxa ka qabato lacagta Giinbaarta ah ee laga qaato gobolada Bariga Somaliland kuwaasi oo isugu jira Kuwo been abuur ah iyo lacagtii Somaliya ee gabowday.
by Osman Omar Faarah
← Russia: Will begin pullout from Georgia on Monday (AP)	60 Gobood oo La Sheegay in ay qaadaceen Diiwaan galintii bariga Sanaag ah,iyo 40 Goobood oo Computers- ka Xumaadeen :- →	Leave a Reply Cancel reply	Enter your comment here...
Maamulaha Shabakada www.samatar.wordpress.com Mr. Farxaan Maxamuud xidig oo adeegyo cusub ku soo kordhiyay website ka CEERIGAABO: Gudida Qaban qaabada Doorashada ururka SEEYO oo soo saaray waqtiga ay qabanayaan doorashada iyo munasibada sanad guurada SEEYO xaalada abaareed ee gobolka sanaag Suldaan Cusub oo lagu caleemo saaray Gudmo biyo cas Xuska Maalinta Qaranimada Gooni isu taaga Somaliland iyo sidii looga xusay magaalada Ceerigaabo learining of Computer Science-ka: (barashada Computer saynis 60 Gobood oo La Sheegay in ay qaadaceen Diiwaan galintii bariga Sanaag ah,iyo 40 Goobood oo Computers- ka Xumaadeen :- Gar-adag:Go’aamo iyo Baaqyo ka soo baxay Shirweynaha Beelaha H/Jeclo oo soo dhamaaday. Russia: Will begin pullout from Georgia on Monday (AP) war gays wacyigaliye ah oo laga bilaabay magaalada ceergaaabo ee gobolka sanaag Create a free website or blog at WordPress.com.